Warbaahinta danwaa Media Network » Taariikhdii Garaad Wiil-Waal ( Qeybtii Labaad )W/q Faarax Gaydh
Shirkado danaynaya dekedda Kismaayo Murashaxii loo Saadaalinayay in uu Noqdo Raisul Wasaaraha Dalka Soomaaliya oo ku Geeriyooday Magaalada Muqdisho!! Mr Saacid oo Xilkiisa ku waayay Heshiisyo lala galay markii la Magacaabayay uu ka baxay(Maxaa kamid ah?) Sirdoonka Saudi Arabia oo lagu eedeyey weerarki lagu qaday safarada Iran ee wadanka Lubnaan Gudoomiye ay madaxweynaha isku heyb yihiin oo xil kaqaadistii Saacid taageeray blog analytics
Taariikhdii Garaad Wiil-Waal ( Qeybtii Labaad )W/q Faarax Gaydh
June 26, 2012 - Written by Maamulka - Edited byMaamulka Bismillahi Raxmaanu Raxiim, Ku Bilaabista Magac Eebbe:
Taariikhdii Garaad Wiil-Waal ( Qeybtii Labaad )
Garaad Wiil-Waal kolkuu hano-qaadayba,Isla Dhalinyaro-nimadiisiiba wuxuu muujiyay astaan ka duwan dhalinyaradii kale ee deegaanka.
Wuxuu Noqday Nin waayeelka ka ag-dhow, Kartinimo buuxda leh, Aftahan ah, Faras fuulka ku xeel dheer, iyo intii lagu amaani jiray Wiil yaroo reer baadiye ah oo qarnigaa jooga.beeshii Garaadku waxay isku af garteen in lagu caano-shubo, loona doorto inuu yahay Hogaankii bulshada, Sababtaas oo aheyd Aabihii Allaha uraxmee oo geeriyooday isla sebenadaas, oo Beeshu Garaadka ninka uqalma in badan baa la eeg-eegay.
Dadka qaar baa laga yaabaa kolkaay maqlaan Wiil-Waal, Inay maskaxdooda soo gasho, Arimo Falaad-xumo,Ficil-Oogan, Dagaal Joogto ah, Colaad abid aloosan. Iyadoo dhici karto in wax ka jireen arimahaasi, Hadana Nin diinta Islaamka aad u qadiraya kuna wanaagsan buu ahaa, Ninkii aan ka gar-dareyna aan ku khaldamin.
Guulaha uu diinta islaamka iyo ummada soomaaliyeed ee ku dhaqan Ogaadeeniya uu Garaad Wiil-Waal usoo hooyay waxaa tusaalooyin kooban lagu muujin-karaa fikirkaas, Halgankii Uu Amaan-Duulaha u ahaa ee dagaalka kula jiray Dadkii Gaaladaa ahaa ee lagu magacaabi jiray ( Galla).
Difaacii ugu adkaa ee soomaaliyu gasho, Waa difaaci uu garaad Wiil-Waal ka gali jiray Kaara-Mardho iyo Gobolka JigJiga gebi ahaantiiba. Ka dib Axmed-Gurey markii la jabshay, Dhowr Qarni ka dib, Saldanad islaam ah oo awood baaxad weyn leh waxaa ugu horeysay Tii Garaad Wiil-Waal.
Marka nimankii Gaalada ahaa in badan bay damaaciyeen iney jabshaan saldanadan oo dhulka dib usoo riixaan. Mar kale waxaa jirtay Isagoo ka geeraaray aqoontiisa diinta islaamka, waa kii yidhi garaadku:
Waagaan wiil yar ahaa
Rag anoon wax la qaybsan
Wacdi sheekh iyo waano
Waalidiinta gabowday baan
Waddada diinta wanaagsan
Ku weeleeyey dhagtayda
Waxaan Geeraarkaas Garaad Wiil-Waal ku xusuustaa, Hadal uu yidhi Sayid Maxamed Cabdille Xasan, isku marxaladna ka turjumaya arigteyda
Mar haddaan wadaad aayad diin, ila ekeynaynin
Ama aan aniga lay odhan karayn, tanu ahaan mayso
Dulucda Qoraalka kolkeynu udhaa-dhacno , waxeynu soo qaadan dhowr arimood oo muhiim ah in la xuso, lagana xusuusto saldanadii Garaadku quwada ay laheyd.
Waxcaa ka mid ah Qaabkii uu sahanka u diri jiray, Qaabkii uu Colka kusoo duula uga hortegi jiray, iyo Qaabkii u shirka u qaban Jiray iyo Qiso dhex-martay isaga iyo Nin Aadan la odhan jiray.
Garaad Wiil-Waal hab habsami ku jirto buu sahanka udirsan jiray.
Waligiina rag sadex nin ka yar dibeda uma dirin , wuuna soo xulan jiray, Dal-Yaqaana ah.
Xujooyin Badan iyo Sarbeebo badan ayuu ragga deegaanka ku kala sooci jiray, Kolba inta ugu fir-fircoon ee ka jawaabta arimaha lasoo hordhigo, Ayuu sooci jiray.Sahanku waa kala sahane, Sahanka Loo soocday Dal-Yaqaanka waa Sahan culus oo waa kii Maxamed cumar dagge yidhi Qarni waagaas ka dambeeyay:
Dal-Yaqaan la aaminay haddii, dowga lagu joojay
Hadalkaas korre wuxuu ka turjumayaa in Sahanka uu rag dalyaqaani ahi ku jiro uu ahaa mid qaali ah. Garaad Wiil-Waal kolkuu soocdo rag tiro sadex ah, ayuu hadana usooci jiray Dhowrka faras ee beesha ka tilmaaman, Awooda iyo Jarre-uloolsamidoodaba. Faraska markay kooreystaan ayuu Qal-Qalooyinka sahan uga buuxin jiray. Ayaan buu u qaban jiray iyo mudo cayiman oo ragaasu kusoo laabtaan, Kolkey soo nabad laabtaana, Midba si gooni ah ayuu ula faqi jiray.
Wuxuu kaloo diri jiray had iyo goorba rag iyaguna sadex nin lagu qiyaasay oo fardo fuushan oo raad-gooyo ah oo iyagu Habeen walba degaanka kusoo laabta. Sadexda nin’ee dambe ee iyagu habeen walba reerka usoo dheelmada waxay soo fiir-fiirayaan, Bal wax raad col ah duleedka iyo aga-gaarkiisa in lagu arko. Raga sadexda ah ee horrena waa kuwo Todobyaado maqnaada, ee beeshe colka layahay ee duulaanka loo qaban-qaabin hayo, kasoo warama.
Intay Maqanyihiin waxay ukuuro galaan, Beeshaas inta Rag waran-gal ah ujoogta, Inta Xoolo ujoogta, Farasyadooda, in beeshu beel xad adagtahay iyo inkale. Cutubka Sadexaadna mid deegaanka oo idil kor meera buu ahaa oo kasoo-diga hadey geetan iyo col dhuumasho ah arkaan.
Qaabkii Colka soo duula looga hor tegi jiray wuxuu ahaa:
Garaad Wiil-Waal Ka hor taga col soo duula aad buu xasaasi ugu ahaa, isagoo eegeya nabad-gelyada bulshada uu garaadka u ahaa iyo deegaankaba.
Sidaas owgeed buu sameyn jiray Sadex cutub oo ukala baxshay sidatan:
Xalaawo Horre,Xalaawo Dhexe iyo Xalaawo Dambe. Wuxuu ugu kala Tilmaami Jiray Xidigaha, oo sadex xidigood ooy isla yaqaaneen weeye, maanta gaaladuna u isticmaasho wax la dhaho “Military-Code”.Xidigta horre intay Iftiimeyso, Xalaawo-Horre yaa Kormeerka reerka iska leh,Markay dhacdana wey soo xero Galaan.
Xidigta xigtana waa Xalaawo-Dhexe oo Iyana markooda toosa oo kormeerka fadhiista, Iyo Xalaawo-dambe oo Kormeerka Saqda dhexe ilaa oogta Waaberi ah. Hadaan intaa kaga gudubno qaabkii sahanka iyo dhufeyska col ka hortegista, Bal aan wax ka eegno qaabkii shirka.
Garaad Wiil-Waal Siduu shirka u qaban jiray waxay aheyd.
Wuxuu tusaale ahaan odhan ” Berri subax Qabri-Bayax ama Araarso baa inoo shir ah oo balantu waa kobtaas, Kolkaasaa wixii Taabo-Qaad ah ee Absame kuumade ah faraska heenseeyn oo hiirta horreba loo dhaqaaqi bar tilmaameedkii shirka. Guurtidii markey shirka ku kalahdo oo la buuxiyo madasha, waxa la sugaaba waa Garaad Wiil-Waal dee.
Garaad Wiil-Waalna aad iyo aad buu usoo daahi jiray oo meejii aroor horre la balamay, ayaa dhici karta inuu Casar gaaban isagoo faraskii weyrax ahaa kaga boodhin-haya yimaado. Wuxuuna uga gol-lahaa inuu kala ogaado Ninka Caajisa ee madasha ka kaca iyo ka dulqaadka leh ee geedka shirka ku nagaada. Markuu yimaado geedka lagu shiriyay, Ayuu isla markaba isha mariyaa inta fadhida, Inta maqana wuu tirsadaa.
Duulaanka Garaad Wiil-Waal mar walba kuma saabsaneyn la dirirka Gaal-Gurey iyo ciidankii Oromo. Beelo Soomaaliyeed oo xukunka Garaadka hoos iman jirayba arimo waa kala gaadheen, oo gabayadiisii baa ka muuqata.
Maalin Maalmaha ka mid ah ayaa nin la odhan Jiray aadan oo ka mid ahaa beelaha degga Geyigaas, uu sheegtay Garaadnimo. Garaad Wiil-Waal baa hadalkii soo gaadhay, Muxuu ka yeelayse? Intuu soo ambobaxay buu dul yimid reerkii Aadan iyo Tolkii oo meel wada degan.
Waji farxad leh buu ku soo dhaweeyay, intaas ka debina Garaad Wiil-Waal arintuu uyimid buu daaha ka qaaday. Wuxuu su,aal maldahan weydiiyay Aadan, oo uu yidhi ( Aadaanow, Garaad baad sheegataye, Sideed ragaaga ku dagaal gelisaa?.Aadan baa intuu ragiisii saf geliyay, waranka feedhaha kaga turqay mid walba oo ragii taaha guuxay , xanuunkii waranka.
Garaad Wiil-Waal aad buu uqoslay oo wuxuu yidhi, ma sidan baa kaa dhab ah?, Ina keen buu yidhi aan ku tuso ciidankeyga waxaan ku habeeyo. Garaad Wiil-Waal ragii buu marti sooray, xoolaa la qashay, Subagiiba Warmaha afkooda la marsaday iyo Toorida Babac-yadeeda, Heenkii hilibkaa Fardaha laga waraabiyay oo lagu naaxiyay.
Intaa ka dib baa lagalay Faras fuulkii, oo Ciidankii baa muujiyay Wacdaro heersare ah, Oo ninba mar gooni ah yuu soo hormaray garaadka, Iyagoo ereyo dhaanto ah ku amaanaya Garaad Wiil-Waal.
Intaas oo dhan wuxuu Garaad WiilWaal ugu gol-lahaa in Aadan la tuso, Awoowda Ciidankiisu leeyahay, In xitaa Aynu Mohosho ugelin inuu duulan kusoo Bixiyo Garaad Wiil-Waal iyo Dadkiisa. Oo Waakii Sayidku yidhi Isagoo udigayay Niman uu maaganaa .
Maandhow siddii aarka dhici,waw ilgalac-layne
Maandhow ilaaq baan ku wadi,aaran kaan diliye
Sidaas Owgeed Garaad Wiil-Waal xeel-dheernimo Maamul Ilaahaybaa Hayb usiiyay buu ahaa.oo Aadan markuu ku laabtay Raaskiisii, AYuu Gabay Amaan ah usoo diray Garaad Wiil-Waal.
Aadan Wuxuu Yidhi:
Haddaad dowlad waydo anna teydu weydowdey.
Hadaad weer isku jiiddo anna waan isku waabi.
Qisaba qiso ayeey kula gashaaye, Garaad Wiil-Waal wuxuu dadka wax ku weydiisan jiray Suugaan maldahan oo sarbeeban, Sida tuu ii Kaga shakiyay Wiilkii ay ina adeerka ahaayeen. Wiil-Waal aabihii markuu geeriyooday allaha uraxmee, waxaa jirtay in Wiilkan Maxamed ahi uu ahaa Ninka ugu jifeysan qoyska ee islaanta dumaasheeda leh. Nin raganimadiisa iyo aqoontiisuba aad ubuuxday buu ahaa, oo Xitaa Garaad Wiil-Waal baa isku dayay inuu dilo oo yidhi hadal ah ” Bartire labadeena mid unba u hadi”
Waxaa la sheegay Maalin ay duulaan galeen, Ayaa duulaankii oo laga soo laabtay baa Garaad Wiil-Waal iyo Wiilkan uu adeerka uyahay ee Maxamed ah oo Fardaha isku garab luudin-haya, Garaad wiil-Waal weydiiyay
(Maxadoow adeer, Haa’daasi maxey ku dageysaa) Garaadku dhanka bidix buu xigay , warankana gacanta midig buu ku lalmin-hayay, Wuxuu rabay Maxamed markuu Jaleeco haada dhanka midig ka duuleysa, Inuu waranka ku tumaatiyo.
Maxamed arinta wuu gartayoo isagoon geesnaba jaleecin buu ku jawaabay ” Adeer Garaadoow Haadu waxey ku dageysaa, Kolba keenii daya)
Marka Laba nin oo sidaas ah bey ahaayeen oo run ahaantii tab dagaal iyo dhan suugaaneedba is dhaamin, amaba isku dhow.
Waxaa kaloo jirtay Maalin Garaad Wiil-Waal intuu geed fadhiistay oo shax jeexday, Irmaan-Dhereran iyo Irmaan-Gudban ukala soocan. isagoo raba inuu wax weydiiyo Maxamed:
Wanaagsane walaalkay dhalyow, wiilkayow Maxamed,
Sac wanaagsanoo weyl watoo, meel wahdiya jooga,
Oo yarahe waalwaalanoo, wiilasha eryooda,
Inaadan weli naaskeeda qaban, ii mar wacad Eebbe,
Wiilkii Maxamed ahaa baa ku jawaabay:
Adeer aniga waad I waanisee, hal an ku weydiiyo,
Hal Waraabe dilayoo hadda na, Weli xalaaleeyay,
Waax qalo haddii lagu yidhaa, oon wax kugu raacin,
Inaanad weel u soo qaadateen, ii mar wacad Eebbe
Qisadaasina sidaas bay udhacday.
Sidii dhaqanka inoo aheyd, waxeynu kusoo afjari Qeybtan Labaad, Gabaygii Garaad Wiil-Waal ee Gubaabada Cajiibka ah xambaarsanaa.
Maqaalkii Horre Gabaygu aan ku soo koobnay, unbuu gabaygana ka turjumayaa, oo waa xiligii uu col uruursiga ku jiray.
Xalay goor aan soo baxayo tashina igu galaloobay
Gudcurkoo madoobaaday oo galawgu yeedhaayo
Gurmadkii Maqnaa soo dhawee guule mahadiiye
Gob an diririn baan lagu kareyn cadaw ka giigaaye
Golyooy oontay waa-taa ilmaha geeska la abaartay
Guluf bixiya geediga rara geelana aroorsha
Garbidii JigJiga waan inaan Gole ku oodnaaye
Gabaahiro lalayaabo waa guray in loo geysto
Waa geeri ama nolol mid uun inaan ka meel gaadho.
La soco Qeybta sadexaad, Inshallah.
Last reply was 10 months ago	Cabdiraxman	View
waxad shektan halgamihi kahoreyay garad wilwaal
Qaramada Midoobay iyo Beesha Caalamka oo Codsatay in Si Deg Deg ah Raisul Wasaare Loo magacaaboDecember 2, 2013
Dhagayso:Madaxwaynaha Jubba-land oo Kahadalaya Dhamaystirka Maamulka Jubba-landDecember 2, 2013